မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ- Voice of Myanmar သတင်းဌာနတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ အယ်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ ကိုနေလင်းကို ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က တရားရုံးထုတ်စဉ်
ပြည်မြို့က DVB သတင်းထောက် ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ချမှတ်လိုက်သလို ၂ပတ်ကျော်လောက် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရနေရတဲ့ Voice Of Myanmar တည်ထောင်သူကိုလည်း ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုတပ်ကာ ရမန်ရယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို ကိုရဲမွန် က တင်ပြပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီး အရေးယူ စစ်ဆေးတာတွေလည်း အများအပြား ရှိလာနေတာပါ။ ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ DVB (ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ) သတင်းဌာနက သတင်းထောက် ကိုမင်းညိုကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ ပြည်ထောင်အတွင်း အထူးတရားစီရင်ရေးမှာဘဲ မေ ၁၂ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ သူနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက ဗွီအိုအေကို ခုလိုအတည်ပြုပါတယ်။
“ ဟုတ်တယ် ဒီဗီဘီ သတင်းထောက်ဆိုတော့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့။ မတ်လ ၈ရက်မတိုင်ခင်ဖမ်းခံရတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျနော်အမှတ်မမှားရင် ၇ကြီမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ ပြည်ထောင်တွင်းတရားရုံးကနေ အမိန့်ချလိုက်တာပါ။ ထောင် ၃နှစ်ချပါတယ်။ ၅၀၅-ကနဲ့။ ကျနော်တို့ တစိုက်မတ်မတ်သိတာက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆို မီဒီယာကို ဒီလိုတင်းကျပ်လို့မရပါဘူး မီဒီယာကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ် ဒါကိုဘယ်လိုအုပ်ချုပ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် သိဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုဆက်ပြီးသတင်းထောက်တွေ လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီကိုသွားတယ်ဆိုတာက ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်းလို့ပြောချင်ပါတယ်။”
သတင်းထောက် ကိုမင်းညိုကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီက DVB သတင်းဌာနအပါအဝင် သတင်းဌာန ၅ ခု ပိတ်သိမ်းမခံရခင် မတ်လ ၃ ရက်နေ့က ပြည်မြို့ ရွှေဆံတော်ဘုရား၊ မြောက်ဘက်ဆောင်းတန်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ သွားရောက်သတင်းယူစဉ် အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရစဉ်က ဦးခေါင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပြီး၊ ပြည်မြို့ ဒေသကွက်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်မှာ ၃ ရက်ခန့် ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားပြီး ထောင်တွင်း တရားစီရင်ရေးအနေနဲ့၇ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းအပြီးမှာဘဲ အခုလို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ကျခံစေဖို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သတင်းထောက်တချို့ကို အကြောင်းပြချက်မရှိ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးတာ၊ အဲဒီ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးဘဲ အမှုတပ်တာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ပြနေတဲ့ Voice of Myanmar သတင်းဌာနတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်၊ အယ်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ ကိုနေလင်းလို့ သိကြတဲ့ ဦးနေမျိုးလင်းနဲ့သတင်းထောက် ဦးရှိုင်းအောင်တို့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၇ရက် မနက်ပိုင်းက မေးမြန်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာ ပြန်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုသွားပေမယ့် ၁၆ရက်ကျော်အကြာမေ ၁၂ရက်မှာတော့ သူတို့ ၂ဦးကို ၅၀၅ (က) နဲ့ ရုံးထုတ် ရမန်ယူပါတယ်။ လာမယ့် မေ ၂၄ ရက်နေ့ကို ပြန်လည် ရုံးထုတ်ဖို့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ ဦး နေမျိုးလင်းရဲ့ ဇနီးက ဗွီအိုအေ ကိုပြောလိုက်တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးကိုခေါ်ယူခံရချိန်ကနေ ခုချိန်ထိ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတာ မရှိသလို ဘယ်လိုကြောင့် ခုလို အမှု တပ်အရေးယူခံရတယ် ဆိုတာ အပါအဝင် ဘာတွေ စစ်မေးခံရတယ်၊ အခုလက်ရှိ ဘယ်မှာ ဖမ်းဆီးထားတယ်၊ သူတို့အမှုကို ဘယ်မှာ စစ်ဆေးသွားမှာလဲ ဆိုတာတွေကို မိသားစုက သိခွင့်မရသလို မေ ၁၂ရက် ရုံးထုတ်ရမန်ရယူတာကို လည်းမိသားစုအနေနဲ့ ကြိုတင် မသိရှိရဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ ရမန်ယူတယ ပြောရမလားရုံးစတယ်ပြောရမလားပေါ့။ ဘယ်လိုမှန်းကို သေသေချာချာကို စုံစမ်းလို့ကိုမရဘူး။ ၂၄ရက်နေ့ရုံးချိန်း ဆိုတာဘဲသိတယ်။ လိုက်မေးတော့လည်း ရမန်ယူတာလိုလို ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ တရားရုံး မေးတော့လည်းသိသိချင်းတရားရုံးသွားတယ် မမှီလိုက်ဘူး။ သူတို့ကချက်ချင်းဘဲ လုပ်ပြီးတန်းပြီးပြန်ခေါ်တာ အဲလိုပြောတယ်။ ဒီကြားထဲ အဆက်အသွယ်မရဘူး။ မတွေ့ရဘူး။ အကုန်လုံးကိုယ့်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး အကုန်ဖြစ်နေကြတာလေတော်တော်များများဒီလိုဘဲ မိသားစုကဘာမှမသိရဘူး။ ခေါ်ပြီးရင် အဆက်အသွယ်မရကြဘူး။ စိတ်ပူရတယ်။ သူတို့အခြေအနေဘယ်လိုမှန်းမသိရဘူး။ လူလဲမတွေ့ရအဲဒါမျိုးတွေပေါ့။ ရုံးထုတ်တယ်ဆိုလဲ ရုံးထုတ်လားမထုတ်ရမသိရ အဲလိုတွေ သူများတွေဆီကနေသိရတော့လဲမိသားစုက ရုံးထုတ်ကိုမမှီအဲလိုက ကိုယ်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး။ အကုန်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါကတော့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပေါ့ ပြောရမယ်ဆို လူတယောက်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးက ဘယ်လိုမှမရှိတော့တာ။”
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ သတင်းဌာနတွေကို ဝင်ရောက်စီးနင်း ရှာဖွေတာတွေ ပိုက်စိပ်တိုက် လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့ကလည်း သန်လျင်ပို့စ်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်း မတူးတူးသာနဲ့ သူသား အပါအဝင် ၄ဦးကို ညဘက် ဧည့်စာရင်းစစ်ဖို့အတွက် ဝင်ရောက်ရှာဖွေ တယ်ဆိုပြီး နေအိမ်ကိုရှာဖွေကာ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းခံရချိန်မှာ ဧည့်စာရင်းမတိုင်တဲ့ အတွက်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခံရတာ ဖြစ်ပေမယ့် ၂ရက်ကျော်ကြာ စစ်ဆေးခံရပြီးနောက် အင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီး တပ်မတော်ကို အကြည်ညိုပျက်အောင်လုပ်ဆောင်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)နဲ့ တရားစွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့အမှုကို မေ ၁၃ရက် ကြာသပတေးနေ့မှာ ရုံးချိန်းအနေနဲ့ ချိန်းဆိုထားတယ်လို့ နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါတယ်။
“မနက်ဖြန်၁၃ရက်နေ့ ရုံးချိန်းရှိတယ်။ ရှေ့နေကနေတဆင့်တော့ တောက်လျှောက်မေးနေတာ. ဘာမှမသိရသေးဘူး။ ဒီကြားထဲကနေရဲစခန်းကနေ သိရတာကတော့ ၅၀၅-ကကြီးနဲ့ဆွဲတယ်။ ခုထိတော့ အဲလောက်ဘဲသိရတယ်။ သန်လျှင်စခန်းကိုမေးတော့ သူတို့ ၄ယောက်စလုံးကို ၅၀၅-ကနဲ့ ဆွဲတယ်ပြောတယ်။ အဲလိုဖြစ်တော့ စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမယ့်ကျမတို့ကတော့ ဘာမှအပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူး မတရားခံရတာလို့ဘဲပြောချင်တယ်။”
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ သတင်းယူနေစဉ် သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီးခံရတာ၊ သူတို့နေအိမ်တွေထဲ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်နေတာမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကစလို့ ဒီနေ့အထိ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့ သတင်းထောက် ၈၀ ထက် မနည်းရှိပါတယ်။
ဒီထဲက အယောက် ၃၀ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ အယောက် ၄၀ ကျော်ကတော့ တပ်မတော်အကြည်ညိုပျက်စေအောင် ပြောဆိုရေးသားမှု ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ကာ အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ စစ်ကြောရေး စခန်းတွေမှာ စစ်မေး ဖမ်းဆီး ခံထားရပါတယ်။ နောက်ထပ် အယောက် ၂၀ နီးပါးကတော့ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရလို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။
သတငျးလောကကို ခွိမျးခွောကျလာတဲ့ ဖမျးဆီးထောငျခမြှုမြား
ပွညျမွို့က DVB သတငျးထောကျ ကိုစဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီက ထောငျဒဏျ ၃ နှဈခမြှတျလိုကျသလို ၂ပတျကြျောလောကျ ချေါယူစဈဆေးခံရနရေတဲ့ Voice Of Myanmar တညျထောငျသူကိုလညျး ပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုတပျကာ ရမနျရယူလိုကျပါတယျ။ ဒီအကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို ကိုရဲမှနျ က တငျပွပေးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး သတငျးထောကျတှေ ဖမျးဆီး အရေးယူ စဈဆေးတာတှလေညျး အမြားအပွား ရှိလာနတောပါ။ ပဲခူးတိုငျး၊ ပွညျမွို့မှာနထေိုငျတဲ့ DVB (ဒီမိုကရကျတဈမွနျမာ့အသံ) သတငျးဌာနက သတငျးထောကျ ကိုမငျးညိုကို ပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ ပွညျထောငျအတှငျး အထူးတရားစီရငျရေးမှာဘဲ မေ ၁၂ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက ထောငျဒဏျ ၃ နှဈ ခမြှတျခဲ့တယျလို့ သူနဲ့ နီးစပျသူတဦးက ဗှီအိုအကေို ခုလိုအတညျပွုပါတယျ။
“ ဟုတျတယျ ဒီဗီဘီ သတငျးထောကျဆိုတော့လညျးသိတဲ့အတိုငျးပေါ့။ မတျလ ၈ရကျမတိုငျခငျဖမျးခံရတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ကနြျောအမှတျမမှားရငျ ၇ကွီမျမွောကျရုံးခြိနျးမှာ ပွညျထောငျတှငျးတရားရုံးကနေ အမိနျ့ခလြိုကျတာပါ။ ထောငျ ၃နှဈခပြါတယျ။ ၅၀၅-ကနဲ့။ ကနြျောတို့ တစိုကျမတျမတျသိတာက ဒီမိုကရစေီနိုငျငံကိုသှားမယျဆို မီဒီယာကို ဒီလိုတငျးကပျြလို့မရပါဘူး မီဒီယာကို လှတျလပျခှငျ့ပေးရမယျ ဒါကိုဘယျလိုအုပျခြုပျသူဘဲဖွဈဖွဈ သိဖို့လိုတယျ။ ဒီလိုဆကျပွီးသတငျးထောကျတှေ လှတျလပျခှငျ့မရှိဘူးဆိုရငျ ဒီမိုကရစေီကိုသှားတယျဆိုတာက ပွဒါးတလမျး၊ သံတလမျးလို့ပွောခငျြပါတယျ။”
သတငျးထောကျ ကိုမငျးညိုကို စဈအုပျခြုပျရေး ကောငျစီက DVB သတငျးဌာနအပါအဝငျ သတငျးဌာန ၅ ခု ပိတျသိမျးမခံရခငျ မတျလ ၃ ရကျနကေ့ ပွညျမွို့ ရှဆေံတျောဘုရား၊ မွောကျဘကျဆောငျးတနျးမှာ ပွုလုပျတဲ့ ကြောငျးသားသပိတျစဈကွောငျးမှာ သှားရောကျသတငျးယူစဉျ အကွမျးဖကျ ရိုကျနှကျဖမျးဆီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဖမျးဆီးခံရစဉျက ဦးခေါငျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအနှံ ရိုကျနှကျခံခဲ့ရပွီး၊ ပွညျမွို့ ဒသေကှကျကဲမှု စဈဌာနခြုပျမှာ ၃ ရကျခနျ့ ဖမျးဆီးထိမျးသိမျးထားပွီး ထောငျတှငျး တရားစီရငျရေးအနနေဲ့၇ ကွိမျမွောကျ ရုံးခြိနျးအပွီးမှာဘဲ အခုလို ထောငျဒဏျ ၃ နှဈ ကခြံစဖေို့ အမိနျ့ခမြှတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
စဈကောငျစီက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ သတငျးထောကျတခြို့ကို အကွောငျးပွခကျြမရှိ ဖမျးဆီး စဈဆေးတာ၊ အဲဒီ ဖမျးဆီးထားသူတှကေို မိသားစုနဲ့ တှခှေ့ငျ့မပေးဘဲ အမှုတပျတာတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ သတငျးတှကေို အှနျလိုငျးပျေါမှာ တငျပွနတေဲ့ Voice of Myanmar သတငျးဌာနတညျထောငျသူလညျးဖွဈ၊ အယျဒီတာခြုပျလညျးဖွဈတဲ့ ကိုနလေငျးလို့ သိကွတဲ့ ဦးနမြေိုးလငျးနဲ့သတငျးထောကျ ဦးရှိုငျးအောငျတို့ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၂၇ရကျ မနကျပိုငျးက မေးမွနျးစရာရှိတယျဆိုပွီး ချေါဆောငျသှားခဲ့ပါတယျ။ညနပေိုငျးမှာ ပွနျပို့ပေးမယျဆိုပွီး အာဏာပိုငျတှကေ ပွောဆိုသှားပမေယျ့ ၁၆ရကျကြျောအကွာမေ ၁၂ရကျမှာတော့ သူတို့ ၂ဦးကို ၅၀၅ (က) နဲ့ ရုံးထုတျ ရမနျယူပါတယျ။ လာမယျ့ မေ ၂၄ ရကျနကေို့ ပွနျလညျ ရုံးထုတျဖို့ သတျမှတျလိုကျတယျလို့ ဦး နမြေိုးလငျးရဲ့ ဇနီးက ဗှီအိုအေ ကိုပွောလိုကျတယျ။
သူတို့နှဈဦးကိုချေါယူခံရခြိနျကနေ ခုခြိနျထိ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ တှခှေ့ငျ့ရတာ မရှိသလို ဘယျလိုကွောငျ့ ခုလို အမှု တပျအရေးယူခံရတယျ ဆိုတာ အပါအဝငျ ဘာတှေ စဈမေးခံရတယျ၊ အခုလကျရှိ ဘယျမှာ ဖမျးဆီးထားတယျ၊ သူတို့အမှုကို ဘယျမှာ စဈဆေးသှားမှာလဲ ဆိုတာတှကေို မိသားစုက သိခှငျ့မရသလို မေ ၁၂ရကျ ရုံးထုတျရမနျရယူတာကို လညျးမိသားစုအနနေဲ့ ကွိုတငျ မသိရှိရဘူးလို့ ဇနီးဖွဈသူက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ ရမနျယူတယ ပွောရမလားရုံးစတယျပွောရမလားပေါ့။ ဘယျလိုမှနျးကို သသေခြောခြာကို စုံစမျးလို့ကိုမရဘူး။ ၂၄ရကျနရေုံ့းခြိနျး ဆိုတာဘဲသိတယျ။ လိုကျမေးတော့လညျး ရမနျယူတာလိုလို ဘာမှနျးကိုမသိဘူး။ တရားရုံး မေးတော့လညျးသိသိခငျြးတရားရုံးသှားတယျ မမှီလိုကျဘူး။ သူတို့ကခကျြခငျြးဘဲ လုပျပွီးတနျးပွီးပွနျချေါတာ အဲလိုပွောတယျ။ ဒီကွားထဲ အဆကျအသှယျမရဘူး။ မတှရေ့ဘူး။ အကုနျလုံးကိုယျ့တယောကျတညျးမဟုတျဘူး အကုနျဖွဈနကွေတာလတေျောတျောမြားမြားဒီလိုဘဲ မိသားစုကဘာမှမသိရဘူး။ ချေါပွီးရငျ အဆကျအသှယျမရကွဘူး။ စိတျပူရတယျ။ သူတို့အခွအေနဘေယျလိုမှနျးမသိရဘူး။ လူလဲမတှရေ့အဲဒါမြိုးတှပေေါ့။ ရုံးထုတျတယျဆိုလဲ ရုံးထုတျလားမထုတျရမသိရ အဲလိုတှေ သူမြားတှဆေီကနသေိရတော့လဲမိသားစုက ရုံးထုတျကိုမမှီအဲလိုက ကိုယျတယောကျထဲမဟုတျဘူး။ အကုနျဖွဈနကွေတယျ။ ဒါကတော့ အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးပေါ့ ပွောရမယျဆို လူတယောကျရသငျ့ရထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးက ဘယျလိုမှမရှိတော့တာ။”
စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး သတငျးထောကျတှကေို ဖမျးဆီးတာတှေ၊ သတငျးဌာနတှကေို ဝငျရောကျစီးနငျး ရှာဖှတောတှေ ပိုကျစိပျတိုကျ လုပျဆောငျနတောပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၂၅ရကျနကေ့လညျး သနျလငျြပို့ဈဂြာနယျ အယျဒီတာခြုပျဟောငျး မတူးတူးသာနဲ့ သူသား အပါအဝငျ ၄ဦးကို ညဘကျ ဧညျ့စာရငျးစဈဖို့အတှကျ ဝငျရောကျရှာဖှေ တယျဆိုပွီး နအေိမျကိုရှာဖှကော ဖမျးဆီးချေါ ဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ဖမျးခံရခြိနျမှာ ဧညျ့စာရငျးမတိုငျတဲ့ အတှကျဆိုပွီး ဖမျးဆီးခံရတာ ဖွဈပမေယျ့ ၂ရကျကြျောကွာ စဈဆေးခံရပွီးနောကျ အငျးစိနျထောငျကိုပို့လိုကျပွီး တပျမတျောကို အကွညျညိုပကျြအောငျလုပျဆောငျမှု ပုဒျမ ၅၀၅ (က)နဲ့ တရားစှဲခံလိုကျရပါတယျ။ သူတို့အမှုကို မေ ၁၃ရကျ ကွာသပတေးနမှေ့ာ ရုံးခြိနျးအနနေဲ့ ခြိနျးဆိုထားတယျလို့ နီးစပျသူတဦးက ပွောပါတယျ။
“မနကျဖွနျ၁၃ရကျနေ့ ရုံးခြိနျးရှိတယျ။ ရှနေ့ကေနတေဆငျ့တော့ တောကျလြှောကျမေးနတော. ဘာမှမသိရသေးဘူး။ ဒီကွားထဲကနရေဲစခနျးကနေ သိရတာကတော့ ၅၀၅-ကကွီးနဲ့ဆှဲတယျ။ ခုထိတော့ အဲလောကျဘဲသိရတယျ။ သနျလြှငျစခနျးကိုမေးတော့ သူတို့ ၄ယောကျစလုံးကို ၅၀၅-ကနဲ့ ဆှဲတယျပွောတယျ။ အဲလိုဖွဈတော့ စိတျတော့မကောငျးဘူးပေါ့ဒါပမေယျ့ကမြတို့ကတော့ ဘာမှအပွဈရှိလို့ခံရတာမဟုတျဘူး မတရားခံရတာလို့ဘဲပွောခငျြတယျ။”
စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး ဆန်ဒပွပှဲတှမှော သတငျးယူနစေဉျ သတငျးထောကျတှေ ဖမျးဆီးခံရတာ၊ သူတို့နအေိမျတှထေဲ ဝငျရောကျဖမျးဆီးတာတှေ လုပျနတောမှာ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျကစလို့ ဒီနအေ့ထိ တနိုငျငံလုံးမှာ ဖမျးဆီးခွငျးခံရတဲ့ သတငျးထောကျ ၈၀ ထကျ မနညျးရှိပါတယျ။
ဒီထဲက အယောကျ ၃၀ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာပမေဲ့ အယောကျ ၄၀ ကြျောကတော့ တပျမတျောအကွညျညိုပကျြစအေောငျ ပွောဆိုရေးသားမှု ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖှငျ့ကာ အကဉျြးထောငျတှနေဲ့ စဈကွောရေး စခနျးတှမှော စဈမေး ဖမျးဆီး ခံထားရပါတယျ။ နောကျထပျ အယောကျ ၂၀ နီးပါးကတော့ ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့ ဖမျးဝရမျးထုတျခံထားရလို့ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနကွေပါတယျ။